चम्किलो छाला चाहनुहुन्छ ? विशेषज्ञले सुझाएका यी फलफूल सेवन गर्नुहोस् — Bhaktapurpost.com
एजेन्सी । छाला रोग विशेषज्ञले चम्किलो छालाका लागि केही उत्कृष्ट फलफूलको सेवन गर्न सुझाउँछन् तर यस पछाडिको कारण के होला ? सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि फलफूल राम्रो औषधी हो । यदि तपाईंले स्वस्थ आहारविहार गर्नुहुन्नँ भने सौन्दर्य प्रशाधनका कुनै पनि उत्पादनले तपाईंको छालालाई चम्किलो बनाउन सक्दैन । छाला शरीरको महत्वपूर्ण अंग भएकोले तपाईंले यसको अत्यधिक हेरचाह गर्नुपर्दछ ।